အသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ထိပ်ပြောင်စပြုနေပြီလား - YOYARLAY Digital Media and News
အသက် ၃၀ မတိုင်ခင်မှာပဲ ထိပ်ပြောင်နေပြီလား? ဒါမှမဟုတ် သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ ထိပ်ပြောင်တဲ့သူတွေရှိနေပြီလား? ဒါဆိုရင် ဘယ်လို တားဆီးကြမလဲ ဆိုတာလေး လက်တို့ပြောပြလိုက်ပါရစေနော်။
အခုခေတ်မှာ အသက် ၃၀ လောက်တောင် မရောက်သေးဘဲ ဦးခေါင်းမှာ ဆံပင်ပေါက်တာ ကျဲလာပြီး ထိပ်ပြောင်စ ပြုလာတဲ့ လူငယ်တွေကို တွေ့လာရပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်တာကို တားဆီးဖို့ အရင်ဆုံး ဦးခေါင်းရဲ့ အရေပြားတွေ ခြောက်မနေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ဆံပင်ပေါက်တယ်ဆိုတဲ့ လုပ်ငန်းတာဝန်ကို အပင်တွေရှင်သန်ဖို့ ထိန်းထားရတဲ့ မြေဆီလွှာတစ်ခုလို ထမ်းဆောင်ပေးနေတာက ဦးခေါင်းပေါ်က အရေပြားတွေပါ။ အစားအသောက် အနေအထိုင် မျိုးရိုးနဲ့ အခြားသော အကြောင်းအရာ အမျိုးမျိုးကြောင့် ဦးရေပြားဟာ ခြောက်သွေ့ပြီး ပူပြင်းလာတာကြောင့် ဆံပင်တွေ ကျွတ်တာ နောက်ထပ် ဆံသားအသစ်တွေ ထွက်တာ ကျဲလာတာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဗောက်တွေ ဆိုးဆိုးရွားရွား အမြဲတစေ ဖြစ်နေတတ်တဲ့သူတွေက ထိပ်ပြောင်နိုင်ခြေ ပိုများစေတယ်လို့ အရေပြားအထူးကု ပရော်ဖက်ဆာ လူးဝစ် ဂါဇာ (Luis Garza) က ဆိုပါတယ်။
ဗောက်တွေကို ဖယ်ရှားဖို့ဆိုရင် ဗောက်ပျောက်ဖို့ အထူးသီးသန့် ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ခေါင်းလျှော်ရည် အနည်းဆုံး ၃ မျိုးလောက်ကို အလှည့်ကျ သုံးပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ခေါင်းလျှော်ရည် တစ်မျိုးတည်းကို အသုံးပြုတာက အာနိသင် အနည်းငယ်စီ ကွဲပြားတဲ့ဓာတ်တွေ ဦးရေပြားကို ထောက်ပံ့ပေးသလို ဖြစ်စေတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးခေါင်းရဲ့ အရေပြားတွေကို သဘာဝနည်းမဟုတ်တဲ့ ဆေးတွေနဲ့ ကုသတာမျိုးတွေ ရှောင်ကြဉ်ပါ။ ဆေးတွေဟာ ခဏတာ အဆင်ပြေနိုင်ပေမယ့် ရေရှည်မှာ အခြေအနေကို ပိုမိုဆိုးရွားစေပါတယ်။
လတ်တလောမှာ အဆင်ပြေအောင် ဆံပင်ကို ရှည်ရှည်ထားပြီး ဆံပင်ပေါက်တာ ကျဲနေတဲ့နေရာတွေကို ဖုံးအုပ်ထားတာက စိတ်ကို လုံခြုံမှုရှိစေသလို ယုံကြည်မှု တိုးစေမှာပါ။ စိတ်ရှုပ်စရာ စိတ်ဓာတ်ကျစရာတွေကို ရှောင်ရှားဖို့လိုပြီး လိင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ဆန္ဒတွေကိုလဲ အနည်းငယ် လျှော့ချဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ သိပ္ပံလေ့လာချက်တွေအရ ဖော်ပြထားပါတယ်။
Ref: Men’sHealth “What to do if you’re going Blad”
Previous Previous post: အိပ်ရေးပျက်တာတွေများရင် တကယ်ပဲ ဝိတ်တက်လာမှာလား
Next Next post: အားလပ်ရက်မှာ ကြည့်စရာရုပ်ရှင်များ